65 Ruux oo caanka ah Muqdsiho oo Hub ka dhigis lagu sameynayo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka 65 Ruux oo caanka ah Muqdsiho oo Hub ka dhigis lagu sameynayo
65 Ruux oo caanka ah Muqdsiho oo Hub ka dhigis lagu sameynayo
Warar xog ogaal oo xaqiiqa.com ay heshay ayaa sheegaya in 65 Qof oo ay ka mid yihiin xildhibaano Baarlamanka ku jiro, Ganacsato caan ah iyo masuuliyiin xillal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii hore ee dalka, ayaa lagu wadaa in hub ka dhigis lagu sameeyo maalmaha soo socdo.
Dhammaan dadkaas ayaa waxa la sheegayaa in ay ka soo jeedaan beelaha Muqdisho dega, Howlgalka oo billoowday ayaa waxaa lagu soo xiray Rag uu ka mid yahay Axmed Daaci, oo ahaan jirey Gudoomihii hore ee Degmada Madiina.
Ilaa hadda xukuumadda Soomaaliya ma shaacinin magacyada Raggaas caanka ah, balse waxaa la ogaan doonaa si magacyadooda marka rasmi ah loo shaaciyo.
Lama oga sida howlgalkaan ay ciidamada ammaanku ugu guuleysan doonaan, hase yeeshe haddii ay ku guuleestaan marka ay dhameestiraan ayaa waxa ay noqon doontaa tallaabo weyn oo dhinaca dowladdnimada horey loo qaaday.
Balse, haddi ay ku guul dareeystaan aya waxa ay ku noqoneysa xukuumadda iyo hey’adaheeda ammniga waji gabax aan laga kabsan kareyn dhibaatada ka dhalata.
Sidoo kale, waxaa jiro warar hadda soo baxaya oo sheegaya in raga la filayo in hu ka dhigista lagu sameeyo ay wadaan abaabulo iyo shirar ay uga arrinsanayaan howlgaalkaan iyo sidii ay uga hortagi la haayeen.
Si kastaba ha ahaate, waxaa Soomaalida oo dhan ay isha ku heysaa sida howlgaladaani ay u hirgali doonaan, howlgakaan ayaa ah midkii ugu horeeyay oo ceenkiisa ah oo ay ku dhaqaaqdo xukuumada uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous articleICRC: waqti ayaa jira lagu wajaho abaarta Soomaaliya
Next articleSomaliland iyo Puntland oo walaac ka muujiyay maamulka Cusub ee Khaatuma.